Ihe ịhụ na South Korea | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | South Korea, Ihe ị ga-ahụ
Site na oge ruo na akụkụ a South Korea ọ dị n'egbugbere ọnụ nke nde mmadụ gburugburu ụwa: ndị nọ n'afọ iri na ụma, ndị na-eto eto na ndị okenye. Ọ bụkwa na ngwaahịa nke ọdịbendị ya buru ibu aghọwo nke a ma ama.
M na-ekwu nke k-ejije, k-pop, sinima auteur ya, gastronomy ya… Ihe niile a bụ ihe dọtara ọtụtụ puku ndị njem na oge ụfọdụ ugbu a. Ma taa, ihe ị ga-ahụ na South Korea.
2 Ihe ị ga-ahụ na South Korea
Republic nke Korea bụ n’ebe ọwụwa anyanwụ Eshia, na Korea Peninsula, nke ọ na-ekerịta na North Korea, mba ndị Kọmunist. Biri na ya Mmadụ nde 51 imirikiti mmadụ na-ebukwa na Seoul, isi obodo ya, na mpaghara ndị gbara ya gburugburu. Site na ọnụọgụ ndị a, ọ nọ n'ọkwa nke anọ n'etiti obodo ndị kacha n'ọnụ ọgụgụ n'ụwa.
Korea chịrị site n'ọchịchị dị iche iche, n'agbanyeghị na nke kachasị ukwuu bụ usoro Joseon nke malitere site na ngwụsị 1910th ruo ngwụsị narị afọ nke XNUMX. Mgbe ahụ ndị Japan bịara na XNUMX, bụ ndị ndị Korea na-enweghị ezigbo ncheta. Mgbe Agha Worldwa nke Abụọ biri, e kewara mba abụọ, otu mpaghara nke United States na mpaghara ọzọ site na Soviet Union.
A mụrụ Republic of Korea ugbu a na 1948. Ndị 50s akara site na Agha Korea, esemokwu dị n'etiti akụkụ abụọ nke peninshula ahụ, nke ruo taa bụ ụdị agha oyi na-atụ. Akụkụ nke abụọ nke narị afọ nke 90 bụ ndị gọọmentị aka ike na mgba okpuru, rue mgbe XNUMXs ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị bidoro jụụ.
Taa, South Korea bụ ochichi onye kwuo uche ya na a mba mepere emepe, nke atọ na-esote Singapore na Japan, nke nwere usoro njem dị mma, Ntanetị nke na-efe efe, na-ebupụ n'usoro nke ụbọchị yana dịka anyị kwuru na mbido, ya ọdịbendị nke gbanweworo ndị na-eme ihe nkiri ya, ndị isi ya na ndị egwu na ọnụ ọgụgụ mba ụwa.
Amaara m na m ga-eme ụfọdụ ndị iro mana dịka onye gụsịrị akwụkwọ na Social Communication na abụ m na onye nyocha mgbasa ozi enweghị m ike ịkọwa ma kwupụta uche m. Achọrọ m ihe nkiri Korea nke ukwuu, agbasoro m ya ihe karịrị afọ 20, mana M na-atụle k-pop a rehash nke umuaka site na '80s,' 90s site na odida anyanwu. Ọ dịghị ihe ọhụụ n'okpuru anyanwụ, ngwaahịa egwu n'ụdị Kidsmụaka Ọhụrụ na Block ma ọ bụ Backstreet Boys nwere ihu dị mma na nkedo plastik.
Gịnị banyere k-ejije? Ha mere nke ọma ọtụtụ n'ime ha, ọtụtụ eserese n'èzí na ịme ihe nkiri dị mma, ọkachasị site na ndị okenye. E nwere nnukwu akụkọ, echere m na site na ịmịpụta ọtụtụ, ha na-egwuri egwu karịa na nkata ahụ, mana ... Ọ na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara ọdịnala Korea na ụzọ dị ogologo ụmụ nwanyị ga-esi abanye na ya.
Ihe a niile kwuru, gịnị ka a ga-ahụ n’obodo a? Anyị nwere ike ikwu nke ahụ E kewara South Korea na mpaghara irigụnyere Seoul, Gyeongiu, Jeju, Busan, Pyeongchang na Ulleundo / Doko Island. O doro anya na anyị ga-amalite Seoul, isi obodo.
Otu n'ime akara ngosi nke Seoul bụ Cheongyecheon Stream, iyi nke obodo ukwu mara mma. Ọ na-amalite na Cheongye Square mara mma, nke nwere ihe edere na akwa akwa 22 na-agafe iyi na isi iyi ya. Mpaghara ahụ na-echeta Cheongyecheon Strom Restoration Project nke gosipụtara nnọkọ, nkwekọrịta, udo na ịdị n'otu. Enweghị ụgbọ ala na ngwụsị izu na ezumike, yabụ ọ bụrụ na ịga n’ụbọchị dị otu a, ị nwere ike ijekwu izu ike.
Isi okwu bu Isi mmiri Vela, ya na egwuri egwu ya na ukwu ya ano, dika mmiri mmiri. N’akụkụ abụọ bụ ụkwụ ụkwụ e ji nkume asatọ mee, nke na-anọchite anya mpaghara asatọ nke South Korea. Mpaghara a mepere emepe n'afọ niile.
Ebe ọzọ a na-eme njem nleta bụ Insa-dong, ebe ị nwere ike ịzụ ahịa dị ukwuu. E nwere otu n'okporo ámá na alleys na abụọ na ụlọ tii, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ụlọ ahịa. E nwere ihe dị ka ebe ngosi nka 100, dị mma maka ịhụ ụfọdụ ọdịnala ọdịnala Korea. Tealọ tii na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ areụ dịkwa mma. Kwa Saturday n'etiti 2 na 10 elekere na Sọnde site na 10 ruo 10 elekere, isi n'okporo ámá na-emechi ka ụgbọ ala na-aghọ nnukwu ma na-agbazi ọdịbendị.
Ekwu okwu banyere Korean omenala na akụkọ ihe mere eme na ị nwere ike ịga na Obodo Bukchon Hanok: enwere ọtụtụ narị ụlọ ọdịnala, a na-akpọ Hanok, mkpakọrịta nwoke na nwanyị site na usoro Joseon. Taa ọtụtụ n'ime ụlọ ndị a bụ ebe ọdịbendị, ụlọ ndị ọbịa, ụlọ oriri na ọ orụ orụ ma ọ bụ ụlọ tii, mana ha na-enye echiche mara mma nke njem dị mfe n'oge. Emechiri emechi na Sọnde, ụbọchị izu ike, yabụ kpachara anya, mana ụbọchị ndị ọzọ ị nwere ike ịdebanye aha maka a njem elekere atọ na ọkara, na Bekee ma mee ndoputa ahụ ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ tupu.
El Gyeongbokgung Obí Ọ dị n’otu mpaghara a makwaara dị ka North Obí. Ọ bụ ụlọ mara mma na ụlọ ochie ochie ise ka bụrụ ndị kacha ibu. E bibiri ya na narị afọ nke 5, ma emesia e weghachiri ya ma ruo taa ọ bụ nnọchiteanya nke akụkọ ihe mere eme mba. Ọ na-emechi na Tuesday, ma n'ọnụ ụzọ na-emechi n'etiti 5 na 30:2400 nke mgbede. nnabata bu XNUMX meriri kwa okenye na enwere njegharị na bekee.
Iji nọgide na-eje ije, anyị na-eso ya Ahịa Namdaemun, Ahịa ọdịnala mepere na 1964 ebe a na-ere ihe niile na ezigbo ego. Ahia imeghe n'abalị, site na elekere 11 ruo elekere anọ nke ụtụtụ, ma na-adọta ndị mmadụ n’obodo niile. Ọ mara ezigbo mma ma ị nwere ike ịzụta uwe, arịa kichin, akụrụngwa ịkụ azụ, akụrụngwa hiking, nka mara mma, ngwa mma, okooko osisi… Enwere ihe karịrị puku ụlọ iri. Emechiri na Sọnde.
Maka ịzụrụ ihe ọzọ, e nwere Mpaghara Myeong-dong, otu n’ime ebe ịzụ ahịa kacha ochie. Enwere okporo ụzọ abụọ dị na etiti ahụ: otu na-amalite na ọdụ ụgbọ oloko Myeong-dong na nke ọzọ na-amalite na Euljiro. Ga-ahụ uwe, ọla, akpụkpọ ụkwụ, ngwa dị iche iche kamakwa ụlọ nri, agbụ nri ngwa ngwa na ụlọ nri ọdịnala. Maka ịzụrụ ihe ejiji ọzọ enwere Cheongdam n'okporo ámá ma ọ bụ ụlọ ahịa Starfield COEX.
N'ihi na ndị hụrụ ihe mgbe ochie hụrụ oge na na National Museum nke Korea na nnukwu nchịkọta ya. Ruo ugbu a, ọ bụ naanị obodo Seoul, mana anyị kwuru na mba ahụ na-enye anyị ihe ọzọ. O doro anya, ọ bụrụ na ị nwere oge na ọchịchọ, ị nwere ike ịga leta mpaghara niile n'ihi na mba pere mpe. Mana na njem ndi mmadu n'ozuzu ha na Seoul, Busan na Jeju Island. Na na ọ bụ obodo ọzọ, ị na-echeta ihe nkiri Train na Busan na zombies ya?
Busan bụ ọdụ ụgbọ mmiri obodo nke etinyere otutu ego na mmepe ya. Karịsịa, na-akwalite ya kwa afọ nkiri ememme, na Busan International Nkiri Ememme, BIFF. Ma na mgbakwunye, enwere osimiri Haendae na Gwangalli Beach, Yongdusan Park na Ahịa Jagalchi. Ọ bụrụ n'ịhụ ihe nkiri a, ị maraworị na ị nwere ike isi na Seoul nweta ụgbọ okporo ígwè ozugbo. Ma oburu n’inwe obi ike igabiga oke osimiri, ighapuru oke osimiri Japan n’ihi na odi nso.
N'ikpeazụ nke Agwaetiti Jeju pụtara ọtụtụ ihe na k-ejije. Ọ bụ a nnukwu njem nleta, maka ịma mma ya na ọdịdị ihu igwe ya dị nro. E nwere nsụda mmiri, ụsọ mmiri, ọnụ ọnụ ugwu, na ọgba. Agwaetiti kacha mma bụ ogige mba, Udo Maritime Park, Yongduam Rock, Jeju Folk Village Museum, Yeomiji Botanical Garden, nnukwu echiche ya na tube kachasị ogologo n'ụwa, World Heritage Site dị ka UNESCO ...
Ndị a bụ Omuma ndi ozo maka njem nke mbu na South Korea. Ọ bụghị naanị ha na ndị mba na-alaghachi mgbe niile maka ihe ndị ọzọ. N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ Korea na ọdịbendị ya, ịgagharị n'ime obodo, ịmara obere ebe ndị njem nleta, ịhapụ ndị mmadụ na isi obodo na-enye echiche ọhụụ banyere ihe anyị na-amata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Ihe ị ga-ahụ na South Korea